Isixazululo sephutha: ukuphuma kwimemori lapho uzama ukumisa i-Grub ku-ArchLinux | Kusuka kuLinux
Isixazululo sephutha: ukuphuma kwimemori lapho uzama ukumisa i-Grub ku-ArchLinux
Izolo sithandwa sami futhi izondiwe I-ArchLinux waya esihogweni uqobo. Konke kwenzeke lapho ngivuselela iphakethe le-libcrypt okuthi, ngenxa yenkinga ethile engaziwa, liqale ukukhombisa amaphutha.
Ngokusobala kungenxa yokuthile okuhlobene nenguqulo yePacMan + Kernel + LibCrypt. Angazi, inkinga ukuthi izicelo eziningi azange zingivulele futhi lapho ngiqala kabusha, azange baphinde bayiphakamise i-X.
Uma ubheka esithangamini se-Arch iziphakamiso bezifana: Phinda ufake uhlelo lwesisekelo. Akumfishane noma kuvila ngiqale ukufaka okulandelayo lo mhlahlandlela omuhle kakhulu, kepha okulandelayo kwenzeke kimi:
Lapho uzama ukumisa i-GRUB ngomyalo:
Kungiphosele iphutha elilandelayo:
Idala ifayili lokumiswa kwe-grub ... Kutholakale isithombe se-linux: / boot / vmlinuz-linux Kutholakale isithombe se-initrd: /boot/initramfs-linux.img Kutholakale iphutha le-memtest86 +: /boot/memtest86+/memtest.bin iphutha: liphelelwe yimemori. iphutha: iphutha le-syntax. iphutha: Umyalo ongalungile. iphutha: iphutha le-syntax. Iphutha le-syntax kulayini 195 kutholakale amaphutha we-syntax kufayela le-GRUB elakhiwe. Qinisekisa ukuthi awekho amaphutha kumafayela we / / etc / default / grub kanye /etc/grub.d/* noma sicela uthumele umbiko wesiphazamisi nge /boot/grub/grub.cfg.new file attached.done
I-WTF? Kepha njengenjwayelo, ikhambi kungukuphelelwa yithemba nokufuna. Impela, ngisho manje, kepha izolo ebengikufuna bekuwukuphonsa i-laptop ngefasitela.
Okufanele sikwenze (ekufakweni okufanayo) hlela ifayela:
bese ufaka umugqa:
Ngemuva kwalokho siqhuba umyalo futhi:
Futhi konke kufanele kuhambe kahle. Futhi akukho lutho, sengivele ngiyafaka I-ArchLinux futhi, ngakho-ke ngisebenzise ngokunenzuzo futhi ngahlukanisa idiski kabusha ukuze nginike isikhala esithe xaxa empandeni (/).
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Isixazululo sephutha: ukuphuma kwimemori lapho uzama ukumisa i-Grub ku-ArchLinux
Ngenhlanhla kulezi zinsuku ngiseholidini emazweni akwaDebian !!
Izolo bengizoshiya lezo zingxenye .. Kepha ukubuyela emuva akulula.
Ungahlala uzama amanye amazwe afana ne-Opensuse 😀
Verdaaaaaaaad !!! Angikhumbulanga lokho okuthunyelwe hahaha ..
funa ukuthola impendulo esithangamini sakho ungayibonisi noma ungayinaki ... lokho kukhuluma ___ ngawe Elav ¬¬ '
Izolo benginosuku lokucinga .. ¬_¬
Ngabeka iphutha kuGoogle futhi isithangami se-Arch saba yinto yokuqala eyavela. 😛
Lokho akusho ukukutshela ukuthi kwesinye isikhathi ngiba nesixazululo kukhompyutha yami (Imibhalo) bese ngiyaphuma ngiyosifuna ku-Intanethi 😀
USantiago Burgos kusho
Damn, kepha kungcono kunokuba ubekile, kulezi zimo kungcono kunokuthi ungaphuthelwa imininingwane ngakho, (uma ungivumela ukuba ngiveze ukuxolisa kwaleli cala) impela leli phutha lokubhanqa nelilahlekile Kungivimbele ukuthi ngiqede ukufaka i-Arch ezinyangeni ezimbalwa ezedlule futhi bengingenayo enye indlela ngaphandle kokuzama iManjaro, kodwa ngizozama ukufaka futhi (manje njengoba ngithenge i-hard drive entsha: D) futhi ngibone ukuthi kuhamba kanjani uma ngithola lelo phutha elifanayo kusukela Kuzofanele ngenze ama-boot amabili ngeWindows (izizathu zomsebenzi nokutadisha okuncane)
Phendula kuSantiago Burgos
U-Alejandro Gil Cal kusho
Kwenzeka into efanayo kimi futhi ngayixazulula kanjena, kepha ngesibuyekezo sokugcina se-grub ezinsukwini ezimbalwa ezedlule esixazululwe, noma okungenani asizange singinike inkinga yokufaka i-Arch kusuka ku-0.
Phendula u-Alejandro Gil Cal
Angazi ukuthi mangaki ama-megabyte owabuyekeze izolo, kimi bekungaba ngama-200 nokuthile; kepha namhlanje nginokunye ukuvuselelwa kwama-megabyte angu-507 (kde 4.12.1-1), kuze kube manje iziphatha ngendlela emangalisayo, kepha angikuthandi ngempela ukuvuselela ama-megabyte amaningi ngezikhathi ezincane, ngamafuphi, kuyinani lokuthola okusha , ngiyabonga ngesixazululo, sengivele ngixwayisiwe.
Yebo iqiniso ukuthi angazi kahle kepha bekukuncane, cishe ngama-megabyte ayi-160, kepha futhi ngibuyekeza i-libreoffice. Noma kunjalo i-beta ye-grub ebisetshenziswe ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ungayilanda ekhasini lephrojekthi bese uzihlanganisa ngokwakho.
Lolu hlobo lokwehluleka lubonakala lungacabangi kimi futhi luthanda nenyanga ngaphandle kokuxazululwa ngoba bese kuvele kimi. Ngicabanga ukuthi uma ziyizimbungulu ezingakuvumeli ukuthi uziqale kufanele zilungiswe ngokushesha okukhulu noma zingashicileli isibuyekezo.
Ngivumelana ngokuphelele nawe, ngisebenzisa i-archlinux kudeskithophu yami ye-pc futhi bekubonakala kuyinto exakayo ukuthi azibuyanga kuphakheji yangaphambilini ye-grub kubhekwe ukuthi lelo phakheji okungenani alizange lingilahle.
Lokhu kungenye yezinto engenza ngizibuze ukuthi kungani ngisasebenzisa i-archlinux? Angazi, kepha noma nini lapho uhlelo luphazamiseka ngokuvuselelwa, kuyajabulisa kakhulu ukuthola ukuthi ungaluxazulula kanjani.
Futhi kulabo abangathandi ukubhekana nezinhlelo zokufa, thuthela kuma-distros "azinzile", okuyikho abakwenzelwe.
Ngisebenzisa i-Arch kepha ngine-grub ngiyiphethe ngenxa yokufakwa kwe-Debian kolunye ukwahlukanisa 😛
Ngingumsebenzisi we-Arch, kepha ngihlala ngithi i-Arch akuyona i-distro engathi sína, kuyithoyizi lokudlala nokulungisa, kepha akukho okunye. Lapho izinto ziba zimbi kufanele usebenzise amanye ama-distros.
Lokho kukhombisa ukuthi kubi kangakanani lokhu kusatshalaliswa kwabantu. ILinux ifinyelela kanjani emphakathini? Angikholwa nge-Arch .. Futhi ucabanga ukuthi abanye bayayincoma futhi bathi ingcono kakhulu .. Okuthile ongakwazanga ukukubuyekeza akusasizi ngalutho ..
I-Arch bekuhlale kushiwo ukuthi yenzelwe abasebenzisi abaphakathi nendawo ukuthi bangancomi kumuntu ongayazi i-linux. I-Arch ibingaba ngcono kakhulu ukube ibinokulawulwa kwekhwalithi ethe xaxa ekupakisheni futhi i-manjaro iwubufakazi balokho. Njengamanje kunezinkinga ezincane nge-firefox ebalekayo ngenxa yokwehluleka okuthile kumshayeli we-nvidia engicabanga ukuthi ngokuvuselelwa kwakamuva kwe-nvidia kuzoxazululwa. Ekukhishweni okukhiphayo kunezinkinga ezemukeleka ngokoqobo lwazo, njengalapho kunezinguquko ezibalulekile, kepha kukhona ezinye ezibonakala zingumphumela wokunganakwa. Wayefunda kubhulogi le-Synflag ukuthi wahlangana kanjani nomphakamisi we-arch owayengakhumbuli ukuthi iyiphi i-gcc ayeyihlanganise ne-xfce. Njengoba i-Itachi arch isho, kuyinto yokudlala yokuxhumana nayo futhi imnandi kakhulu kulabo abathanda ukuzama izinto.
Unolwazi! Siyabonga ngempendulo.
Kade ngisebenzisa i-Arch kuphela kwi-PC yami cishe iminyaka engu-3-4. Futhi, yize "kunenkinga" kangakanani, angikaze ngibe nenkinga ebucayi njengaleyo eposini, engiphoqe ukuthi ngiphinde ngifake isistimu yesisekelo (empeleni angikaze ngibe nayo, nokuthi ngivuselela nsuku zonke futhi ngifaka amaphakheji avela ku-AUR kuya kumansalva). Kuyindida emsebenzini ukuthi ngisebenzise i-old and "robust" (futhi "for all the public") iWindows XP, lapho ngingenayo ngisho nemvume yomlawuli yokufaka noma yini, lapho amakhasi "ayingozi" evinjelwe ngummeleli "obusisiwe" . Futhi kule minyaka emi-5 kuye kwadingeka ukuthi bafomathe futhi bafake i-OS kule khompyutha okungenani kabili! Ngakho-ke i-Arch "ayizinzile" njengoba wonke umuntu edinga?
I-Arch akuyona into evame ukuqondwa emhlabeni we-linux njenge-distro "ezinzile", kepha iphambene kakhulu ngoba ibuyekeza inguqulo yakamuva etholakalayo yazo zonke izinhlelo nemitapo yolwazi ngaphandle kokuhlolwa kanzima. Ngaphezu kwalokho, amaphakheji awanamathegi ngaphandle uma kubalulekile njenge-kernel. Okunye okusele kungu-vanilla version. Kepha naphezu kwalesi khothamo sizinzile futhi kunzima ukusiphula. Ku-arch yonke into ingalungiswa ngenxa yokuthi ayinalo noma yiluphi uhlobo lokumiswa okuthile noma imibhalo ezenzakalelayo eyenza izinqubo njengakwamanye ama-distros. U-Allan McRae uqobo uthi akunconywa ukuthi kusetshenziswe ezindaweni zokukhiqiza.
Sebenzisa kangcono iDebian, iSlackware noma, uma wehluleka lokho, vulaSUSE bese ukhohlwa ngama-vibes amabi 😀
Yebo, bengilokhu ngiyisebenzisa iminyaka futhi bengizoyishintshela iGentoo, ngokuqondene nephutha le-grub, lena enye lapho bebanikeza ukubeka amasiginesha bekuyizo kuphela izinkinga engibe nazo, kepha akukho okungakwazi ukuxazululwa ngokufunda okuncane.
Ngikuthola kunelukuluku lokuthi omunye u-elav, umvikeli wokuqina kwe-debian (ayisebenzisile) ugcina esebenzisa i-Arch futhi uthi kunzima kuye ukuthi abuyele emuva.
Ngiyaqonda ukuthi ukusebenzisa isitebhisi se-debian ideskithophu kuyakhathaza (angikucabangi nokukucabanga ngoba nakho kwehluleka) ngenxa yezinhlelo eziphelelwe yisikhathi, i-kernel, ... yingakho ekugcineni ngigcine ngishiya futhi ngabuyela ku-OpenSuse yami.
Isebenzisa isitebhisi se-debian ideskithophu ekuncisha isikhathi eside izinhlobo ezintsha ze-kernel ngokuthuthuka kwazo, kanye nezinguqulo zakamuva zezindawo zedeskithophu, ngakho-ke kufanele uzidele ukuze ukwazi ukusebenzisa izinketho ezintsha nokwenza ngcono (ngisho nalokhu kusuka kokuhlangenwe nakho kwami).
Futhi i-Arch angiyifuni nakupenda ngoba angizimisele "isikhathi nesifiso" sokuthi kufanele ngixazulule izinkinga noma ngiphelelwe yisistimu lapho ngiyidinga kakhulu noma ngomzuzwana ongcono, lokho akukunginiki ukuthula kwengqondo.
Into enhle ekugcineni, sebenzisa i-distro engakushiyi uphonswe futhi inebhalansi enhle phakathi kokuzinza nemali. Inketho engaphezu kokunconyelwa le OpenSuse, ngaphandle kokungeza amanye ama-repos athile ungawabuyekeza kalula kunguqulo yakamuva yedeskithophu yakho, i-kernel, ... ..
yize ngincamela ukuhlala nalokho okuza ekuphumuleni okusemthethweni. Ngemuva kwalokho ukuvuselelwa kwesistimu lapho inguqulo entsha iphuma isebenza 🙂
Nami kwenzeka into efanayo esikhathini esingangenyanga esedlule, njengoba bengingasitholi isixazululo, ngishintshele eSyslinux.
IGoggles Music Manager: Isidlali somculo esifana noClementine noma uRhythmbox kodwa engasindi
I-Adobe Flash Plugin izoyeka ukusebenza kuChromium ngo-Ephreli